भुटेको मीठो आलु र बेकन संग मटर | भान्सा व्यंजनहरु
मारिया vazquez | 05/06/2021 10:00 | तरकारी रेसिपीहरू
घर मा, हामी लगभग प्रत्येक हप्ता मटर खान को आदी छौं। हामी सँधै साना भिन्नताहरूको साथ उनीहरूलाई त्यसरी नै तयारी गर्दछौं। क्लासिकमा किन केही परिवर्तन गर्ने हेमको साथ मटर यसले हामीलाई टेबुलमा नथाक्न मद्दत गर्दछ। र हो, यसले यस जस्तो साधारण संस्करणहरू सिर्जना गर्न पनि योगदान पुर्‍याउँछ मटर भुटेको मीठा आलु र बेकन संग।
भुटेको मीठो आलु यो मटरको लागि एक उत्तम साथ हो। यसले यो डिशलाई मीठो स्पर्श दिन्छ जुन सँधै मेरो लागि आकर्षक हुन्छ र जुन बेकनको नुनिलो स्पर्शसँग बिल्कुल भिन्न छ। हामीले प्याज पनि थपेका छौं, किनकि प्याज जहिले पनि प्लस हुन्छ।
के तपाइँ यो थाल पुन: निर्माण गर्न चाहानुहुन्छ? त्यसो गर्नु तपाईंको लागि एकदम सजिलो हुनेछ। घटक सूची सानो छ र मोटाई छ आधा घण्टामा पकाउने विधि तयार हुन्छ। ओभरमा मीठा आलु पकाउँदै गर्दा, बाँकी सामग्रीहरू तयार पार्न तपाईंसँग समय हुनेछ। यो परिक्षण गर्नुहोस!
रेसिपी प्रकार: Verduras
कुल समय: 35 m
मटरको १ कप
बेकनको दुई मोटा स्लाइसहरू
मीठो आलुका लागि
१ मध्यम मीठा आलु
११० मिलि। अतिरिक्त कुमारी जैतूनको तेल
Salt चम्चा नुन
Ap पेपरिकाको चम्मच
एकचोटि सकियो, हामी एक कप मा तेल मिक्स, नुन र पेपरिका मीठो आलु ब्रश गर्न।
त्यसो भए, हामी मिठो आलु र छीलो २ सेन्टीमिटर स्लाइसमा काट्नुहोस्। बाक्लो जुन हामी बेकिंग ट्रेमा राख्छौं, चर्मपत्र कागजमा।
मिश्रणको साथ ब्रश गर्नुहोस् जुन हामीले मीठो आलुको स्लाइसहरू तैयार गरेका छौं १० मिनेट को लागी बेक गर्नुहोस् वा जबसम्म टेन्डर र किनारहरू थोरै सुनौलो हुन्छन्।
जबकि मीठो आलु स्लाइसहरू भुईरहेको छ, एक स्किलेटमा प्याज पच १ table मिनेटको लागि दुई चम्चा तेलमा।
एकै साथ पानी र नुनको सास प्यानमा मटर पकाऊ minutes मिनेट को लागी वा उनीहरूसँग तपाइँको मनपर्ने बनावट नभएसम्म।
त्यसपछि, हामी पासे बेकन सम्मिलित गर्दछौं वा तपाईं प्याजको साथ प्यानमा फाल्नुहुन्छ र केही मिनेट को लागी साटा गर्नुहोस्। समाप्त गर्नका लागि, पकाइएको र बग्ने मटर थप्नुहोस् र तातो मिलाउनुहोस्।
यस समयमा हामीसँग सबै सामग्रीहरू तयार छन् थाल माउन्ट गर्नुहोस्। तल मीठो आलुको स्लाइसहरू राख्नुहोस् र त्यसमाथि प्याज, बेकन र मटरको मिश्रण राख्नुहोस्।
अन्तमा र भुटेको मीठो आलु र बेकनको साथ मटरको सेवा गर्नु अघि, हामी ताजा जमीनको मिर्च जोड्दछौं
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » भाँडा » तरकारी रेसिपीहरू » मटर भुटेको मीठा आलु र बेकन संग
प्याज र हेमको साथ हरियो बीन्स